Landelela amavidiyo wakho we-Youtube | Martech Zone
Landelela amavidiyo wakho we-Youtube
NgoMsombuluko, Julayi 13, 2009 NgoLwesithathu, Februwari 22, 2017 Douglas Karr
Abantu abaningi abakuqapheli, kodwa Youtube inezinto ezithile eziyisisekelo analytics ngawe ukulandelela amavidiyo akho. Uma ungathanda ukwazi ukubona ukuthi obani abashumekayo nokuthi badlale imidlalo emingaki, kulula ukusebenzisa i-Youtube Insight ithuluzi.
Okokuqala, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Youtube bese ukhetha eyodwa yamavidiyo wakho. Uzobona i Insight inkinobho kubha eseceleni yangakwesokudla:
Okulandelayo, khetha Ukutholwa futhi uzothola imenyu yezinketho:
Khetha Isidlali Esishumekiwe futhi uzohlangatshezwa nohlu lwazo zonke izingosi ividiyo efakwe kuyo nokuthi itholwe kangaki lapho:
Leli ithuluzi elikhulu lomthengisi! Uma isayithi lithatha enye yamavidiyo akho egciwane, le kuyindlela enhle yokulandela umkhondo hhayi kuphela amasayithi anentshisekelo - kepha amasayithi athwala ithrafikhi encane. Ungalanda futhi lezi zibalo ngefayela le-CSV.
Tags: youtubeizibalo ze-youtubeukumaketha kwe-YouTubeamamethrikhi we-youtubeukulandelela i-youtube
Imboni Yeselula Ukushisa
Ukusetshenziswa Kwemidiya Yezenhlalo Akuyona Ingcweti Yokwenza
Jul 14, 2009 ku-3: 35 AM
Kuhle lokho, futhi nakanjani ngizongeza ukulandela umkhondo lapho ngiqala ukuthumela ku-youtube.